BSA ဆိုင်ကယ်အကြောင်း တစေ့‌တစောင်း - hotnewmyanmar.com
BSA ဆိုင်ကယ်အကြောင်း တစေ့‌တစောင်း
April 26, 2022 April 26, 2022 - by zorrow - LeaveaComment
ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကို ခေတ်နဲ့အပြိုင် မော်ဒယ်အမျိုးမျိုးတွေနဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင် ထုတ်လုပ်နေကြတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီထဲကမှ တစ်ခေတ်တစ်ခါက အလွန်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အကြမ်းခံပြီး အင်မတန် စီးလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ BSA ဆိုင်ကယ်အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ထိလဲ ဒီရှေးဟောင်းဆိုင်ကယ်တွေကို အမြတ်တနိုး ထိန်းသိမ်းထားသူတွေ၊ စီးနင်းသူတွေဟာ မြန်မာနဲ့ အချို့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ရှိနေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သူ ဒေါ်တင်တင်စိန်ဟာ ကမ္ဘာပတ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်ကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဖြတ်သန်းသွားခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမစီးခဲ့တဲ့ဆိုင်ကယ်ဟာ BSA ဆိုင်ကယ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ၁၉၄၂ ခုနှစ်ထုတ် BSA M20 ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ်။
လူအများစုက BSA လို့ အလွယ်ခေါ်ကြပေမဲ့ သူ့ရဲ့အရှည်ကောက်က(Birmingham Small Arm) လို့ခေါ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိသျှစက်မှု ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အဲဒီကုမ္ပဏီကြီးဟာ လက်နက်ခဲယမ်း၊ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ဘတ်စကားနဲ့ စက်မှုပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
ဒီကုမ္ပဏီကိုတော့ ၁၈၆၃ ခုနှစ်ကတည်းက တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၈၈ဝ ပြည့်နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ စက်ဘီးတွေကို စတင်ထုတ်လုပ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉ဝ၅ ခုနှစ်မှာတော့ စက်ဘီးတွေကို Minerva အင်ဂျင်တွေတပ်ပြီး ပါဝါစက်ဘီးတွေအဖြစ် စတင်ရောင်းချခဲ့တာဟာ BSA မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းရဲ့အစ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၁၀-ပြည့်နှစ် လန်ဒန်အိုလံပစ်ပွဲမှာတော့ မြင်းကောင်ရေ ၃ ဒသမ ၅ အားသာရှိတဲ့ BSA အင်ဂျင်တပ်စက်ဘီးကို ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် လူကြိုက်အလွန်များခဲ့ပြီး တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၁၉ ခုနှစ်မှာတော့ စက်ဘီးတွေကို အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ဆိုင်ကယ်သီးသန့်ရောင်းချဖို့အတွက် BSA မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကုမ္ပဏီကို ခွဲထွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာ ပထမဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်ကယ်အမျိုးအစားကတော့ Model E ပါ။ 50 degree vee-twin အင်ဂျင် 770cc ရှိတဲ့ ဒီဆိုင်ကယ်ကို ၁၉၂ဝ ပြည့်နှစ်အတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး တစ်စီးကို ပေါင် ၁၃၀ နဲ့ ရောင်းချခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆိုင်ကယ်ဟာ 7-Plate clutch,3speed gear box နဲ့အတူ Kickstarter ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။လူကြိုက်များခဲ့ပြီး Bluestar,Empire,Star,Silver Star,Gold Star, M20(500 cc),M21(600 cc), M22 (500 cc) နဲ့ Sloper စတဲ့မော်ဒယ်အမျိုးမျိုးကို အဆင့်မြှင့်တင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး လူကြိုက်အများဆုံးကတော့ S27 ခေါ် Sloper မော်ဒယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
BSA ကုမ္ပဏီဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာလဲ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ရပြီး နိုင်ငံနဲ့စစ်တပ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ လက်နက်နဲ့ခဲယမ်းတွေကို စက်ရုံပေါင်း ၆၇ ခု လောက်တည်ဆောက်ပြီး ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စစ်တပ်အတွက်အသုံးပြုဖို့ စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါင်း ၁၂၆ဝဝဝ ခန့်ကို ၁၉၃၇ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ်အတွင်း ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ စစ်သုံးဆိုင်ကယ်တွေကတော့ M20(500 cc) နဲ့ M21(600 cc) မော်ဒယ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီခေတ်က မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ BSA M20 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို တော်တော်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်က4stroke အင်ဂျင်၊ ဂီယာ ၄ ချက်၊ ၈ လက်မအချင်းရှိပြီး လိုအပ်ရင် အဝေးက မမြင်ရအောင် ကာကွယ်ထားနိုင်တဲ့ Black out mask ပါတဲ့ မီးလုံးကြီး၊ ခရီးဝေးသွားနိုင်တဲ့ ၃ ဂါလန်ဆံ့တဲ့ ဆီတိုင်ကီစတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ စစ်ကြီးပြီးတဲ့အခါ ဒီဆိုင်ကယ်တွေကို တတ်နိုင်သူတွေက လိုက်လံဝယ်ယူပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ စီးနင်းပြီး အမြတ်တနိုး ထိန်းသိမ်းထားသူတွေလဲ ရှိပါ တယ်။
အဲဒီအချိန်က BSA ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကုမ္ပဏီ အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အများပြည်သူအသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဒီဇိုင်းပြောင်းကာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တခြားနာမည်နဲ့ ဆိုင်ကယ်ကုမ္ပဏီတွေ ဖြစ်တဲ့ Triumph, Ariel, Sunbeam နဲ့ New Hudson တို့ကို ဝယ်ယူခဲ့တာကြောင့် BSA ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဈေးကွက်အများစုကို ချုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
BSA Bantam,A10 Super Rocket နဲ့ A65 Thunderbolt,Lightning,Spitfire စတဲ့ ဆိုင်ကယ်အမျိုးအစားတွေဟာ လူကြိုက် အလွန်များခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်နဲ့ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွေမှာ ကမ္ဘာ့ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ပွဲတွေကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှ ဆိုင်ကယ်မင်းသားဖြစ်သူ Jeff Smith က B 40 မော်ဒယ်ကိုစီးရင်း အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။
၁၉၆၅ ခုနှစ်မှာတော့ BSA ရဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဈေးကွက်ကို အခြားကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ ချက်ကုမ္ပဏီ Jawa၊ စပိန်ကုမ္ပဏီ Bultaco၊ ဆွီဒင်ကုမ္ပဏီ Husqvarna နဲ့ ဂျပန်နာမည်ကြီးတံဆိပ်တွေဖြစ်တဲ့ ဟွန်ဒါ၊ တိုယိုတာ၊ ယာမဟာ စတာတွေဟာ အပြိုင် အဆိုင်ထုတ်လုပ်လာတာကြောင့် BSA ဟာ ဈေးကွက်တော်တော်များများကို လွှတ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။
စီးနင်းသူတွေကလဲ ခံ့ခံ့ထည်ထည်နဲ့ ရိုးရိုးပုံစံ BSA ဆိုင်ကယ်တွေထက် ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်း ဈေးသက်သာတဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေကို ပိုပြီးနှစ်သက်တာကြောင့် BSA ကို ဝယ်ယူသူ နည်းပါးလာခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၈ ခုနှစ်မှာတော့ ဒီဇိုင်းဆန်းကို BSA Rocket3ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ တန်ဖိုးကြီးမြင့်တာကြောင့် စီးရေအနည်းငယ်သာ ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရင်မကြီးပေးအပ်တဲ့ စက်မှုထုတ်ကုန်ဆုကိုတော့ ရခဲ့ပါသေးတယ်။
၁၉၇၁ ခုနှစ်မှာတော့ Triumph ဆိုဒ်မှာ ထုတ်ကုန်အားလုံးကို ဒီဇိုင်းအသစ်တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ ဂျပန်ထုတ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကို မယှဉ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Small Health က စက်ရုံကို ပိတ်သိမ်းပစ်ခဲ့ရပါတယ်။
၁၉၇၂ ခုနှစ်မှာ Norton-Villiers ကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းပြီး BSA နာမည်မပါဝင်တော့ဘဲ Norton Villiers Triumph နာမည်နဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း Gold Star 500 (B50), 650 Thunderbolt/ Lightning နဲ့750 cc Rocket Three စတဲ့ မော်ဒယ် ၄ မျိုးသာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက် အောင်မြင်မှုမရတော့ဘဲ ၄ နှစ်အကြာမှာ စက်ရုံတွေကို အပြီးတိုင် ပိတ်သိမ်းပစ်ခဲ့ရပါတော့တယ်။
၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာတော့ Norton Villiers. Triumph ကုမ္ပဏီကို ဖျက်သိမ်းပြီး BSA ကို ဗြိတိသျှ လုပ်ငန်းရှင် Dennis Poore ရဲ့ Manganese Bronze Holdings လုပ်ငန်းစုက ပြန်လည်ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၆ခုနှစ်မှာတော့ Bolckley မှာ စက်ရုံတည်ဆောက်ပြီး စစ်ဘက်ဆိုင်ရာနဲ့ off-road မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကို ထပ်မံထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး အာဖရိကနိုင်ငံတချို့ကိုရောင်းခဲ့ပေမဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ထဲ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မွမ်ဘိုင်းအခြေစိုက် စက်မှုကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုကြီး Mahindra Group က BSA ကို ပေါင် ၃ ဒသမ ၄ သန်း တန်ဖိုးနဲ့ ပြန်လည်ဝယ်ယူခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာတော့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ စကူတာအရေအတွက် အနည်းငယ်ကို လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီခွဲဖြစ်တဲ့ Mahindra Two Wheelers ကနေ ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့် လက်ရှိအချိန်မှာ မူလလက်ဟောင်း BSA ဆိုင်ကယ်တွေဟာ ရှားပါးနေပါပြီ။ သူ့ခေတ်သူ့အခါက နာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းခံပြီး စီးလို့ကောင်းတဲ့ BSA ဆိုင်ကယ်အကြောင်း တစေ့တစောင်းကို ဆိုင်ကယ်ချစ်သူတွေအတွက် ရေးသား တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Author – ကောင်းစစ်ဟန်
Source: BSA motorcycles by Wikipedia and Thutazone.
Previous Article ကမ္ဘာကြီးပျက်ဆီးဖို့နီးပြီလား
Next Article ယူကရိန်းနှင့် တစ်သားတည်းရှိသည့်အနေဖြင့် စပိန်ရှိ ရွာတစ်ရွာ ယူကရိန်းဟု အမည်ပြောင်း